आफूभित्र सही प्रकारको अग्नि प्रज्वलित गर्नुहोस्
हामीभित्र हुने तीन प्रकारका अग्निहरू अनि तिनको प्रकृतिको बारेमा व्याख्या गर्दै, सद्‌गुरु, आफूभित्रको अग्निलाई रूपान्तरण गर्ने सम्भावनाको बारेमा समेत बताउँदै हुनुहुन्छ ।
यसअघिको ब्लगमा एक दिव्य जीव वायुपङ्खी घोडामा आएर अन्धकार हटाउने प्रतिकात्मक कुरा उल्लेख गर्दै, सद्‌गुरुले यो बताउनु भएको थियो कि यदि तपाईंले ज्योति बाल्नुभयो भने, अन्धकार आफैँ हट्नेछ । सोही सन्दर्भमा, यस ब्लगमा हामीभित्र हुने अग्नि तत्त्व अनि तिनका आयामहरूको बारेमा चर्चा गरिएको छ ।
सद्‌गुरु: यहाँको परम्परा नै यस्तो रहेको छ कि यदि तपाईं सही परिवेश सृजना गर्न चाहनुहुन्छ भने, सबैभन्दा पहिला तपाईं दियो बाल्नुहुन्छ । तपाईंहरूमध्ये कतिले दियो बाल्ने गर्नुहुन्छ ? यदि तपाईंले दियो बालेर यत्तिकै त्यहाँ बसिरहनु भयो भने, तपाईंले निश्चय नै फरक महसुस गर्न सक्नुहुन्छ— तपाईंले कुनै पनि भगवानमा विश्वास गर्नैपर्दैन ! तपाईंले दियो बाल्नेबित्तिकै, ज्योतिको वरिपरी स्वतः एउटा विशेष आकाशीय क्षेत्र सृजना हुन्छ । आकाशीय क्षेत्र जति बढी हुन्छ, सञ्चार (संवाद) पनि त्यति नै राम्रो हुन्छ । दिव्यसँग संवाद गर्नुअघि सही किसिमको परिवेश, एक विशेष मात्रामा आकाशीय क्षेत्र सृजना गर्नु उचित हुन्छ । किनकि, आकाशीय क्षेत्र नहुने हो भने, भित्तासँग कुरा गर्नु बराबर हुन्छ । यदि तपाईंले पर्याप्त ध्यान गर्नुभयो भने, त्यसबेला समेत तपाईंको वरिपरी आकाश तत्त्व बढ्दै जान्छ ।
जीवन भनेकै अग्नि हो । सूर्यको अग्निले गर्दा नै यस धरतीमा जीवन सम्भव भएको छ ।
अग्नि फरक–फरक प्रकारको हुन्छ । जीवन भनेकै अग्नि हो । सूर्यको अग्निले गर्दा नै यस धरतीमा जीवन सम्भव भएको छ । मानव शरीरमा यो अग्नि जठराग्नि को रूपमा प्रकट हुन सक्छ । जठराग्निको कारणले तपाईंलाई भोक लाग्ने गर्दछ, किनकि जठराग्नि पेटको अग्नि हो, जननेन्द्रियको अग्नि हो । यदि तपाईंको भोक मेटियो भनेमात्र, यो "कामवासनाको अग्नि" सल्किनेछ । जसले केही खाएको हुँदैन, उसलाई कामवासनाप्रति चासो नै हुँदैन । यदि तपाईंले जठराग्निलाई रूपान्तरण गर्नुभयो भने, यो चित्ताग्नि बन्न सक्छ । त्यसबेला, तपाईं बौद्धिक रूपमा तीक्ष्ण बन्नुहुन्छ । कामवासना र खानाप्रतिको उत्सुकता हराउँछ, किनकि तपाईंमा बुद्धिको अग्नि सल्किएको हुन्छ ।
एकपटक जब तपाईंभित्र भूताग्नि (तत्त्वहरूको अग्नि) प्रज्वलित हुन्छ, तपाईं जीवनको प्रक्रियालाई नै आफ्नो हातमा लिन सक्नुहुन्छ । अर्थात्, तपाईंले कसरी जन्म लिने, कसरी बाँच्ने, कुन तरिकाले मर्ने वा कुन तरिकाले नमर्ने भन्ने जस्ता कुराहरू रोज्न सक्नुहुन्छ ।
म यो चाहन्छु कि यस कथामार्फत तपाईं आफ्नो जठराग्निलाई चित्ताग्निमा, चित्ताग्निलाई भूताग्निमा रूपान्तरण गर्ने कोसिस गर्नुहोस्— तपाईं यी तीनवटै पक्षहरूलाई अलिकति मात्रै भएपनि स्पर्श गर्नुहोस् ।